Nei Jesu Akafa?
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Cakchiquel (Central) Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mixe Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Saramaccan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Asi ngatitii mubvunzo wacho unopindurudzwa zvobva zvanzi, “Unoda kufa here?” Kazhinji vanhu vakawanda vanopindura kuti aiwa. Izvi zvinoratidzei? Pasinei nematambudziko atinotarisana nawo, tinongoda kurarama nekuti takaberekwa takadaro. Bhaibheri rinoratidza kuti Mwari akasika vanhu vaine chido chekurarama. Rinototi “akaisawo nguva isingagumi mumwoyo mavo.”—Muparidzi 3:11.
Zvitsauko zvitatu zvekutanga zvebhuku reBhaibheri raGenesisi zvinotiudza kuti Mwari akaita kuti vanhu vekutanga Adhamu naEvha vave nemukana wekurarama upenyu husingaperi, uye akavaudza zvavaizofanira kuita kuti vawane upenyu ihwohwo. Tinobva taudzwa nezvekutadza kwavakaita kuteerera Mwari ndokurasikirwa nemukana iwoyo. Nyaya yacho inotaurwa zviri nyore zvekuti vakawanda vanokurumidza kuiona sengano. Asi sezvakaita mabhuku eEvhangeri, bhuku raGenesisi rine uchapupu hunoratidza kuti zviri mariri zvakanyatsoitika. *
Kusateerera kwemunhu mumwe chete ainge asina chivi, Adhamu, kwakakonzera chivi nerufu kwatiri. Saka kuti tinunurwe parufu paidiwa munhu asina chivi aikwanisa kuteerera kusvika pakufa. Bhaibheri rinotaura nezvazvo richiti: “Vazhinji zvavakaitwa vatadzi nokuda kwokusateerera kwomunhu mumwe chete, saizvozvowo nokuda kwokuteerera kwomunhu mumwe chete vazhinji vachaitwa vakarurama.” (VaRoma 5:19) Jesu ndiye “munhu mumwe chete” akateerera. Akabva kudenga, akararama semunhu asina chivi, ndokutifira. * Izvi zvinoita kuti Mwari atione sevanhu vakarurama uye zvinotipa mukana wekurarama upenyu husingaperi.
Nei Jesu aifanira kufa kuti izvi zviitike? Mwari Wemasimbaose aisakwanisa here kupa murayiro wekuti vana vaAdhamu vararame nekusingaperi? Hapana mubvunzo kuti Mwari aiva nesimba rekuita izvozvo. Asi kuita izvi kwaizopesana nemutemo wake wekuti mubayiro wechivi rufu. Mutemo uyu waisagona kungosendekwa parutivi kana kungochinjwa kuti zvinhu zvireruke. Mutemo wacho unoratidza kuti Mwari anotonga zvakarurama.—Pisarema 37:28.
Rufu rwaJesu rwakanyatsoitika. Munhu wese ane mukana wekuwana upenyu husingaperi. Unoda kurarama nekusingaperi here? Jesu akaratidza zvatinofanira kuita paakati: “Kuti vawane upenyu husingaperi, vanofanira kuramba vachiwana zivo pamusoro penyu, imi Mwari wechokwadi chete, uye pamusoro pouya wamakatuma, iye Jesu Kristu.”—Johani 17:3.
^ ndima 8 Ona chikamu chakanzi “The Historical Character of Genesis,” mubhuku rinonzi Insight on the Scriptures,” peji 922, rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.
^ ndima 13 Mwari paakatamisa upenyu hweMwanakomana wake kubva kudenga huchienda mudumbu raMariya, zvakaita kuti Mariya ave nepamuviri, uye mudzimu mutsvene waMwari wakadzivirira Jesu kuti asatora chivi kubva kuna Mariya.—Ruka 1:31, 35.
Usiku hwokupedzisira asati apa upenyu hwake, Jesu akaungana nevaapostora vake vakatendeka ndokubva atanga Chirangaridzo cherufu rwake. Akati kwavari: “Rambai muchiita izvi muchindiyeuka.” (Ruka 22:19) Vachiteerera murayiro uyu, veZvapupu zvaJehovha pasi rose vanoungana gore rimwe nerimwe kuti vayeuke rufu rwaJesu pamusi warwakaitika. Gore rapera vanhu 19 862 783 vakaungana kuti vayeuke rufu rwaJesu.